China Cryogenic ọkara size mmiri mmiri oxygen gas osisi Liquid Nitrogen Osisi ndị na-emepụta na ndị na-enye ngwaahịa | Ma ọ bụ
Cryogenic ọkara size mmiri mmiri oxygen gas osisi Liquid Nitrogen Plant
Principlekpụrụ imewe nke osisi a dabere na isi esi mmiri dị iche iche nke ikuku ọ bụla. Air abịakọrọ, precooled wee nwetara mwepụ nke H2O na CO2, mgbe ahụ ka a ga-mma na isi okpomọkụ Exchanger ruo mgbe ọ na-liquified. Mgbe mmezi, mmepụta oxygen na nitrogen nwere ike ikpokọta.
Nke a na osisi bụ nke MS ọcha nke ikuku na boosting tobaim expander usoro. Ọ bụ osisi ikuku nke ikuku, nke na-eweju ihe ndozi zuru ezu na ndozi maka ịme argon.
Raw ikuku na-aga ikuku nyo maka mwepụ nke ájá na n'ibu adịghị ọcha na-abatakwa ikuku tobaim Compressor ebe ikuku abịakọrọ ka 0.59MPaA. Mgbe ahụ ọ na-abanye n'ime usoro ikuku ikuku, ebe ikuku dị jụụ na 17 ℃. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-asọba na tankol adsorbing tank abụọ, nke na-agba ọsọ, ka ewepu H2O, CO2 na C2H2.
Mgbe ọcha, ikuku mixes na ịgbasa reheated ikuku. Mgbe ahụ, ọ na-abịakọrọ site n'etiti mgbali Compressor na-ekewa n'ime iyi 2. Otu akụkụ na-aga na onye na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ ka ọ dị mma na -260K, ma na-a theụ si n'etiti akụkụ nke onye na-agbanwe ọkụ ọkụ iji banye tobawanye gbasaa. Gbasawanyere ikuku laghachi isi okpomọkụ Exchanger na-reheated, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-aga ka ikuku boosting Compressor. Akụkụ ọzọ nke ikuku na-eme ka ume ọkụ dị elu dị elu, mgbe ọ jụrụ, ọ na-asọba na onye na-agbasawanye okpomọkụ. Mgbe ahụ ọ na-aga igbe dị oyi ka ọ dị mma ruo ~ 170K. Akụkụ ya ka ga-eme ka ọ dị mma, ma na-aga na ala nke kọlụm dị ala site na onye na-agbanwe ọkụ. Na ikuku ọzọ na-a suụ arahụ na obere ọnwụnwa. gbasaa. Mgbe emechara ya, a na-ekewa ya n'akụkụ 2. Otu akụkụ na-aga na ala nke kọlụm dị ala maka ndozi, ndị ọzọ na-alaghachi na onye na-agbanwe ọkụ na-ekpo ọkụ, mgbe ahụ ọ na-asọba na nkwalite ikuku mgbe emechara ya.
Mgbe mmezi nke mbụ dị na kọlụm dị ala, ikuku mmiri na mmiri nitrogen dị ọcha nwere ike ịnakọta na kọlụm dị ala. Mmiri ahihia nitrogen, mmiri mmiri ikuku na mmiri mmiri dị ọcha nitrogen aga na elu kọlụm site na mmiri mmiri ikuku na mmiri mmiri nitrogen oyi. A na-edozi ya na kọlụm dị elu ọzọ, mgbe nke ahụ gasịrị, a pụrụ ịnakọta oxygen mmiri mmiri nke 99.6% ịdị ọcha na ala nke kọlụm dị elu, ma wepụta ya na igbe oyi dị ka mmepụta.
Akụkụ argon pere mpe na kọlụm dị n'elu bụ nke ara na kọlụm argon. Enwere akụkụ 2 nke kọlụm buru ibu nke crude. A na-enyefe ntụgharị nke akụkụ nke abụọ n'elu nke mbụ site na mgbapụta mmiri mmiri dị ka reflux. A na-agbazi ya na kọlụm buru ibu nke crọn argọn iji nweta 98.5% Ar. 2ppm O2 crude argon. Mgbe ahụ a na-enyefe ya na etiti nke argon dị ọcha site na evaporator. Mgbe emezigharị na kọlụm argon dị ọcha, (99.999% Ar) argon mmiri mmiri nwere ike ịnakọta na ala nke kọlụm argon dị ọcha.
Wasrogen nitrogen si n'elu kọlụm dị elu na-esi na igbe oyi na-eme ka ọ dị ọcha dị ka ikuku na-agbanweghachi, izu ike na-aga n'ụlọ elu dị jụụ.
Nitrogen si n'elu kọlụm na-enyere aka na kọlụm dị elu na-esi na igbe oyi dị ka mmepụta site na ngwa nju oyi na onye na-ekpo ọkụ ọkụ. Ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa nitrogen, mgbe ahụ enwere ike inyefe ya n'ụlọ elu mmiri jụrụ oyi. Maka ikike oyi nke ụlọ elu jụrụ mmiri ezughi ezu, ọ dị mkpa ka etinye chiller.
1, Air Compressor (pistin ma ọ bụ mmanụ-free)
2, Air Refrigeration Unit
3.Air ọcha usoro
4, Air tank
5, Water iche
6, molekụla myọ sieve purifier, PLC auto）
7, nkenke nyo
8 column Ogidi ndozi
10, Oxygen Ọcha Analyzer
Nke gara aga: Creditable emeputa-mmiri mmiri-oxygen-nitrogen-argon-mmepụta-osisi
Osote: Cryogenic oxygen osisi na-eri mmiri oxygen osisi
Nitrogen Argon Oxygen Na -emepụta Igwe Osisi